Triune भगवान - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
हाम्रो बारे > WKG लाई विश्वास गर्नुहोस् > ईश्वरीय भगवान
धर्मशास्त्र को गवाही अनुसार, भगवान तीन शाश्वत, समान तर फरक व्यक्तिहरु पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा मा एक ईश्वरीय अस्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र साँचो ईश्वर हुनुहुन्छ, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी। उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता, ब्रह्माण्डको रक्षक र मानिसको उद्धारको स्रोत हुनुहुन्छ। यद्यपि उत्कृष्ट, भगवान प्रत्यक्ष र व्यक्तिगत रूपमा मानिसहरु मा कार्य गर्दछ। भगवान प्रेम र असीम भलाइ हुनुहुन्छ। (मार्क १२:२;; १ तिमोथी १:१;; एफिसी ४: 12,29; मत्ती २:: १;; १ यूहन्ना ४:;; ५:२०; तीतस २:११; यूहन्ना १::२;; २ कोरिन्थी १३:१३; १ कोरिन्थी 1: 1,17-4,6)
यो मात्र काम गर्दैन
पिता भगवान हुनुहुन्छ र पुत्र भगवान हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ मात्र एक भगवान हुनुहुन्छ। यो परिवार वा ईश्वरीय प्राणीहरुको समिति हैन - एक समूह भन्न सक्दैन, "म जस्तो कोहि छैन" (यशैया ४३:१०; ४४.;; ४५.५)। भगवान मात्र एक ईश्वरीय प्राणी हो - एक व्यक्ति भन्दा बढी, तर केवल एक भगवान। प्रारम्भिक ईसाईहरु मूर्तिपूजा वा दर्शन बाट यो विचार प्राप्त गरेनन् - उनीहरु धर्मशास्त्रहरु द्वारा त्यसो गर्न को लागी एक प्रकार को बाध्य थिए।
किन ईश्वरशास्त्र अध्ययन गर्ने?
धर्मशास्त्रको बारेमा मसँग कुरा नगर्नुहोस्। केवल मलाई बाइबल सिकाउनुहोस्। " औसत इसाईहरूको लागि, ईश्वरशास्त्र केही निराशाजनक जटिल, निराशाजनक रूपले भ्रामक र पूरै अप्रासंगिक जस्तो लाग्न सक्छ। जो कोही बाइबल पढ्न सक्दछन्। त्यसोभए किन हामी ठूला ईश्वरविद्हरूलाई तिनीहरूको लामो वाक्यहरू र अनौंठा अभिव्यक्तिहरूको आवश्यकता छ?
धर्मशास्त्रलाई "विश्वास खोज्ने समझ" भनिएको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, मसीहीहरूको हैसियतमा हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौं तर हामी कसमाथि भरोसा गर्छौं र हामी उहाँमाथि किन विश्वास गर्छौं भनी बुझ्ने इच्छासहित परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। यो जहाँ धर्मशास्त्र आउँछ। "ब्रह्मज्ञान" भन्ने शव्द दुई ग्रीक शब्दहरू, थिओस, जसको अर्थ परमेश्वर हुनुहुन्छ, र लोगिया, जसको अर्थ ज्ञान वा अध्ययन - ईश्वरको अध्ययनको संगमबाट आएको हो।
ठीकसँग प्रयोग गरिएको छ भने धर्मशास्त्रले चर्चलाई झूटा शिक्षा वा झूटा शिक्षाको बिरूद्धमा सेवा गर्न सक्छ। त्यो हो, किनभने प्रायजसो झूटा शिक्षाहरू परमेश्वर को हुन् भन्ने गलत धारणाबाट आएको हो, त्यस्ता धारणाबाट जुन बाइबलले आफूलाई परमेश्वरमा प्रकट गरेको तरिकासँग सहमत छैन। चर्चले सुसमाचारको प्रचार गर्नु भनेको पक्कै पनि परमेश्वरको आत्म-प्रकाशको जगमा रहनुपर्दछ।
भगवानको बारेमा ज्ञान वा ज्ञान भनेको त्यस्तो चीज हो जुन हामी आफैंले सोच्न सक्दैनौं। हामीले ईश्वरको बारेमा केहि पनि पत्ता लगाउन सक्ने एउटै मात्र तरिका भनेको परमेश्वरले आफ्नो बारेमा बताउनुभएको कुरा सुन्नु हो। हामीलाई प्रकट गर्न परमेश्वरले सबैभन्दा उत्तम तरिका छनौट गर्नुभएको बाइबल हो, जुन पवित्र आत्माको रेखदेखमा धेरै, धेरै शताब्दियौंदेखि संकलित शास्त्रहरुको संग्रह हो। तर लगनशील भई बाइबल अध्ययन गर्दा पनि उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर राम्ररी बुझ्न सक्दैन।
हामीलाई केवल अध्ययन मात्र चाहिन्छ - हाम्रो दिमागलाई बाइबलमा परमेश्वर आफैले के प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। अन्तमा, परमेश्वरबाटको साँचो ज्ञान केवल परमेश्वरबाट आउँदछ, मात्र मानव अध्ययन, तर्क र अनुभवबाट।
यस चर्चको विश्‍वास र आचरणको समिक्षा गर्ने परमेश्वरको जिम्मेवारी हो। ईश्वरीय शिक्षा भनेको इसाई सम्प्रदायको निरन्तर सत्यको खोजीमा छ किनकि यसले नम्र भई परमेश्वरको बुद्धि खोज्छ र पवित्र आत्माको निर्देशनलाई सबै सत्यतामा पछ्याउँछ। जबसम्म ख्रीष्ट महिमामा फर्कनुहुन्न, चर्चले यो अनुमान गर्न सक्दैन कि उनले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरिसकेका छन।
यसै कारणले गर्दा धर्मशास्त्र भनेको चर्चको धर्म र शिक्षालाई मात्र सुधार गर्नु हुँदैन, बरु आत्म-परीक्षणको कहिल्यै अन्त नहुने प्रक्रिया हुनुपर्दछ। जब हामी परमेश्वरको रहस्यको ईश्वरीय ज्योतिमा खडा हुन्छौं केवल हामी भगवानको साँचो ज्ञान पाउँछौं।
पावलले ईश्वरीय रहस्यलाई "तपाइँमा ख्रीष्ट, महिमाको आशा" (कलस्सी १:२)) भन्नुभएको छ, यो रहस्य हो कि यसले ख्रीष्टको माध्यमबाट भगवानलाई खुशी पार्छ "पृथ्वीमा होस् वा स्वर्गमा, सबैले उसलाई शान्ति दिएर आफैंलाई मिलाउन। क्रूसमा रगत Col (कलस्सी १:२०)।
इसाई चर्चको प्रचार र अभ्यासको लागि जहिले पनि छानबिन र राम्रो ट्यूनिंगको आवश्यकता पर्दछ, कहिलेकाँही महत्वपूर्ण सुधार पनि, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाँदा।
इसाई चर्चले आफूलाई र यस संसारलाई परमेश्वरको आत्म-प्रकाशको प्रकाशमा हेर्ने निरन्तर प्रयासलाई र त्यसपछि पवित्र आत्मालाई त्यो अनुरुप फेरि पनि एक मानिस बन्न सक्ने बनाउनलाई गतिशील शब्द भनेको राम्रो शब्द हो। प्रतिबिम्बित गर्दछ र परमेश्वर वास्तवमा के हो घोषणा गर्नुहुन्छ। हामी चर्चको इतिहास भर ईश्वरशास्त्र मा यो गतिशील गुण देख्न सक्छौं। जब तिनीहरूले येशूलाई मसीहको रूपमा घोषणा गरे प्रेरितहरूले धर्मशास्त्रको पुनः व्याख्या गरे।
येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरको आत्म-प्रकाशको नयाँ कार्यले बाइबललाई नयाँ प्रकाशमा प्रस्तुत गर्‍यो, प्रेरितहरूले देख्न सक्ने ज्योति किनभने पवित्र आत्माले तिनीहरूका आँखा खोलिदिनुभयो। चौथो शताब्दीमा अलेक्जान्ड्रियाका विशप अथानासियसले मूर्तिपूजकहरूलाई परमेश्वरको बाइबलीय प्रकाशको अर्थ बुझ्न मदत गर्न बाइबलमा नभएका धर्महरूमा स्पष्टीकरणात्मक शब्दहरू प्रयोग गरे। १ 16 औं शताब्दीमा, जोन क्याल्भिन र मार्टिन लुथरले चर्चको नविकरणको लागि लडाई गरे बाइबलीय सत्यको मागको आधारमा कि येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा अनुग्रहले मात्र मुक्ति पाइन्छ।
१ the औं शताब्दीमा, जोन म्याकलोद क्याम्पबेलले स्कटल्याण्डको चर्चको साँघुरो दर्शनको प्रयास गरे
येशूको प्रायश्चितको प्रकृति विस्तार गर्न [प्रायश्चित] मानवताका लागि र त्यसपछि उहाँको प्रयासको लागि बाहिर निकालियो।
आधुनिक युगमा, सक्रिय विश्वासको आधारमा चर्चलाई गतिशील धर्मशास्त्रमा कल गर्न यत्तिको प्रभावकारी कोही थिएन जस्तो कि कार्ल बार्थ, जसले उदारवादी प्रोटेस्टेन्ट धर्मशास्त्रले मानवतावादले चर्चलाई लगभग गिर्‍साएपछि "युरोपमा बाइबल फिर्ता दिए"। ज्ञानवर्द्धनको र त्यस अनुसार जर्मनीको चर्चको धर्मशास्त्रलाई आकार दिए।
भगवानको कुरा सुन्नुहोस्
जब पनि चर्चले परमेश्वरको आवाज सुन्न असफल हुन्छ र यसको सट्टामा उसले आफ्नो अनुमान र मान्यतालाई दिन्छ, यो कमजोर र प्रभावहीन हुन्छ। यो सुसमाचारको साथ पुग्न प्रयास गर्नेहरुको आँखामा प्रासंगिकता हराउँदछ। यही कुरा ख्रीष्टको शरीरको कुनै पनि अ .्गमा लागू हुन्छ जब यो आफ्नै पूर्व निर्धारित विचार र परम्परामा समाहित हुन्छ। यो बोग्ड, अडिग वा स्थिर, गतिशीलको विपरित हो, र सुसमाचारको प्रचारमा यसको प्रभावकारिता गुमाउँछ।
जब त्यो हुन्छ, चर्च फुट्न वा विभाजित हुन थाल्छ, इसाईहरू एक अर्काबाट अलग्गै परिपक्व हुन्छन् र एक आपसमा प्रेम गर्ने येशूको आज्ञालाई पृष्ठभूमिमा फिक्याउँदछ। त्यसोभए सुसमाचारको प्रचार केवल शब्दहरूको एक समूह, प्रस्ताव र बयान हुन्छ जुन मानिसहरूले सजिलैसँग स्वीकार गर्दछन्। पापी मनको लागि चिकित्सा प्रदान गर्ने अन्तर्निहित शक्तिले यसको प्रभाव गुमाउँछ। सम्बन्धहरू बाह्य र केवल सतही बन्छन्, येशूसँग र एक अर्कासँग गहिरो सम्बन्ध र एकता छुटेको छ, जहाँ वास्तविक उपचार, शान्ति र आनन्द वास्तविक अवसरहरू हुन्छन्। स्थिर धर्म एउटा अवरोध हो जसले विश्वासीहरूलाई येशू ख्रीष्टमा हुनुपर्दछ भन्ने ईश्वरीय मानिसहरू बन्नबाट रोक्न सक्दछ।
चुनाव वा डबल पूर्वनिर्धारण को सिद्धान्त लामो समय सम्म एक विशेषता वा सुधारिएको ईश्वरशास्त्रीय परम्परा मा सिद्धान्त को पहिचान (परम्परा जॉन केल्विन द्वारा छायाएको छ) भएको छ। यो सिद्धान्त प्राय: गलतफहमी, विकृत, र अनन्त विवाद र पीडा को कारण भएको छ। केल्विन आफैं यो प्रश्न संग संघर्ष गरे र यस मा उनको शिक्षा को शब्दहरु संग धेरै द्वारा व्याख्या गरीएको थियो: "अनन्तकाल देखि भगवानले केहि मुक्ति को लागी र केहि धिक्कार को लागी पूर्वनिर्धारित गर्नुभएको छ।"
चुनावको सिद्धान्तको यो पछिल्लो व्याख्यालाई "हाइपर-क्याल्भनिष्ट" को रूपमा वर्णन गरिएको छ। यो एक मनमानी निरंकुश र मानव स्वतन्त्रताको शत्रुको रूपमा भगवान को एक घातक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिन्छ। यस सिद्धान्तको यस्तो दृष्टिकोणले यसलाई येशू ख्रीष्टमा परमेश्वर आफैले प्रकट गरेको सुसमाचार बाहेक अरू केही पनि बनाउँछ। बाइबलीय गवाहीले परमेश्वरको वैकल्पिक अनुग्रहलाई अचम्मको रूपमा वर्णन गर्दछ, तर क्रूर होइन! परमेश्वर जसले सित्तैंमा प्रेम गर्नुहुन्छ, जसले यसलाई प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ उनीहरुलाई स्वतन्त्र अनुग्रह प्रदान गर्दछ।
हाइपर-क्याल्भिनवादलाई सच्याउन आधुनिक चर्चका प्रख्यात सुधारवादी धर्मविद् कार्ल बार्थले येशू ख्रीष्टमा अस्वीकार र चुनाव केन्द्रित गर्दै निर्वाचनको सुधारित सिद्धान्तलाई नयाँ रूप दिए। चर्च चर्चको खण्ड २ मा उनले चुनावको पूर्ण बाइबलीय शिक्षालाई यसरी प्रस्तुत गरे जुन परमेश्वरको आत्म-प्रकाशको सम्पूर्ण योजनासंग मेल खान्छ। बार्थले जोड दिएर देखाए कि त्रिएकको सन्दर्भमा निर्वाचनको सिद्धान्तको केन्द्रीय उद्देश्य रहेको छ: यसले घोषणा गर्दछ कि सृष्टिकर्ता, मेलमिलाप र मुक्तिमा परमेश्वरले गर्नुभएका कार्यहरू येशू ख्रीष्टमा प्रकट गरिएको परमेश्वरको नि: शुल्क अनुग्रहमा पूर्ण रूपमा प्राप्त भएको छ। यो पुष्टि गर्दछ कि त्रिएक भगवान, जो सदाको लागि मायालु समुदायमा बाँचिरहनुभएको छ, अरूलाई यस समुदायमा अनुग्रहबाट समावेश गर्न चाहन्छ। सृष्टिकर्ता र उद्धारक आफ्नो सृष्टिको साथ सम्बन्धको लागि धेरै इच्छा गर्छ। र सम्बन्धहरू स्वाभाविक रूपमा गतिशील हुन्छन्, स्थिर हुँदैन, स्थिर हुँदैनन् र अपरिवर्तनीय हुन्छन्।
आफ्नो कथित शिक्षामा, जसमा बार्थले त्रिएकवादी निर्माता-उद्धारकर्ताको सन्दर्भमा चुनावको सिद्धान्तमाथि पुनर्विचार गरे, उनले यसलाई "सुसमाचारको योग" भने। ख्रीष्टमा, परमेश्वर एक करारको सम्बन्धमा सबै मानिसजातिको छनौट गर्नुभयो आफ्नो समुदायको जीवनमा स्वेच्छाले र अनुग्रहपूर्वक मानवताका निम्ति परमेश्वर हुन रोज्नुभयो।
येशू ख्रीष्ट दुबै छनौट र हाम्रो खातिर अस्वीकार गरीएको छ, र व्यक्तिगत चुनाव र अस्वीकृति मात्र उहाँमा वास्तविक रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा, परमेश्वरको पुत्र हाम्रो लागी छानिएको हुनुहुन्छ। सार्वभौमिक, चुनेको मानव को रूप मा, उसको विकल्प, विपक्षी चुनाव दुबै ठाउँ मा मृत्यु को निन्दा (क्रस) को लागी र हाम्रो ठाउँ मा अनन्त जीवन (पुनरुत्थान) को लागी हो। यो अवतार मा येशू ख्रीष्ट को मेल खाने काम पतन मानवता को छुटकारा को लागी पूरा भएको थियो।
त्यसकारण हामीले ख्रीष्ट येशूमा हाम्रोलागि परमेश्वरको होमा हो भन्नु पर्छ र स्वीकार्य छ र हाम्रो लागि पहिले नै सुरक्षित गरिएको कुराको आनन्द र ज्योतिमा बस्न थाल्छ - एकता, संगति र एक नयाँ सृष्टिमा उहाँसँग सहभागिता।
चुनावको सिद्धान्तमा आफ्नो महत्वपूर्ण योगदानमा बार्थ लेख्छन्:
«किनकि यी एक व्यक्ति, येशू ख्रीष्टसित परमेश्वरको एकतामा [एकतामा] हुँदा उनले सबैसित आफ्नो प्रेम र एकता देखाए। यसमा उनले सबैका पाप र अपराधहरू आफैंमा लिए र यसैले ती सबैलाई उच्च कानूनले उनीहरूको न्यायबाट बचायो जुन उनीहरूले आफैंलाई बोलाए, ताकि उनी वास्तवमै सबै मानिसहरुको साँचो सान्त्वना हो। "
सबै कुरा क्रसमा परिवर्तन भएको छ। सबै सृष्टिहरू, चाहे यो जान्दछन् वा जान्दैनन्, बनिएको छ, भइरहेको छ र मुक्त हुनेछ, परिवर्तन हुनेछ र येशू ख्रीष्टमा नयाँ बनाइनेछ। उहाँमा हामी नयाँ सृष्टि हुन्छौं।
थर्थस एफ। टोरन्स, शीर्ष विद्यार्थी र कार्ल बर्थको दोभाषे, बर्थको चर्च डोगामेटिक्सको अंग्रेजीमा अनुवाद हुँदा सम्पादकको रूपमा काम गरे। टोररन्सको भोल्युम दोस्रो विश्वास गरिएको सबैभन्दा उत्कृष्ट ईश्वरशास्त्रीय कार्यहरू मध्ये एक हो। उनी बारथसँग सहमत थिए कि सम्पूर्ण मानवता उद्धार गरियो र ख्रीष्टमा मुक्ति पायो। प्रोफेसर टोरन्सले द मेडिएसन अफ क्राइष्ट पुस्तकमा बाइबलीय प्रकाशको पुस्तक प्रस्तुत गरेको छ कि, आफ्नो विकराल जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा येशू हाम्रो प्रायश्चितको मेलमिलापकर्ता मात्र हुनुहुन्न, तर परमेश्वरको अनुग्रहको पूर्ण उत्तरको रूपमा पनि काम गर्नुहुन्छ।
येशूले हाम्रो टुक्रिनुभयो र हाम्रो न्याय आफैमा लिनुभयो, उहाँले सबै तहमा सृष्टिलाई उद्धार गर्न, र हाम्रो बिरूद्धमा उभिएका सबै कुरालाई एक नयाँ सृष्टिमा रूपान्तरण गर्न पाप, मृत्यु र दुष्टलाई हटाउनुभयो। हामीलाई हाम्रो धर्मी र विद्रोही स्वभावबाट आन्तरिक सम्बन्धमा मुक्त गरियो जसले हामीलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ र पवित्र पार्नुहुन्छ।
टोरन्सले भनेको छ कि "जसले स्वीकार्दैन, ऊ निको हुँदैन।" जुन कुरा ख्रीष्टले आफैंमा लिनुभयो त्यो मुक्ति पाएन। येशूले हाम्रो वैवाहिक मनोवृत्ति आफैमा राख्नुभयो; परमेश्वरसँग मिलाप गर्न हामी उहाँ नै हौं। हाम्रो पापपूर्ण मानवता हाम्रो लागि मानव बन्ने उनको भव्य प्रेमपूर्ण कार्यबाट उसले पापी मानवतालाई शुद्ध, शुद्ध र पवित्र गर्यो।
अरू सबैजस्तो पापको सट्टामा, येशूले हाम्रो शरीरमा पापको निन्दा गर्नुभयो जसले हाम्रो शरीरमा पूर्ण पवित्र जीवन बिताउनुभयो र उहाँको आज्ञाकारी पुत्रको माध्यमबाट उहाँले हाम्रो वैमनस्यता र अनाज्ञाकारी मानवतालाई पितासँग साँचो, मायालु सम्बन्धमा परिवर्तन गर्नुभयो।
पुत्रमा, त्रिएक ईश्वरले हाम्रो मानव प्रकृतिलाई आफ्नो अस्तित्वमा ल्याउनु भयो र यसले हाम्रो प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो र मेलमिलाप गर्नुभयो। हाम्रो पापी स्वभावलाई आफ्नै बनाएर र यसलाई निको पार्दै येशू ख्रीष्ट परमेश्वर र पतित मानवता बीचको मध्यस्थकर्ता हुनुभयो।
एक व्यक्तिमा भएको हाम्रो चुनावले येशू सृष्टिको लागि परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्दछ र परमेश्वर स्वतन्त्र रूपमा प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर परिभाषित गर्दछ। टोरेन्स वर्णन गर्दछ कि "सबै अनुग्रह" को अर्थ "मानवता कोहि होइन", बरु, सबै अनुग्रहको अर्थ सम्पूर्ण मानवता हो। यसको मतलब हामी आफैंमा एक प्रतिशत पनि समात्न सक्दैनौं।
विश्वासद्वारा अनुग्रहले, हामी सृष्टिप्रतिको ईश्वरीय प्रेम अरू तरिकामा बाँड्छौं जुन पहिले सम्भव थिएन। यसको मतलव हामी अरूलाई पनि प्रेम गर्छौं जस्तो कि परमेश्वर हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, किनकि अनुग्रहबाट ख्रीष्ट हामीमा हुनुहुन्छ र हामी उहाँमा छौं। यो केवल नयाँ सृष्टिको आश्चर्यकर्म भित्र हुन सक्छ। पवित्र आत्मामा पुत्रमार्फत पिताबाट मानवजातिलाई प्रकट गरिएको प्रकाश उहाँबाट आउँदछ, र मुक्ति पाएको मानवताले अब पुत्रद्वारा आत्मामा विश्वास गरेर पितामा प्रतिक्रिया देखाउँदछ। हामीलाई ख्रीष्टमा पवित्र हुन बोलाइएको छ। उहाँमा हामी पाप, मृत्यु, दुष्टता, कठिनाइ र हाम्रो विरुद्धमा खडा भएको न्यायबाट स्वतन्त्रता पाउँछौं। हामी विश्वासको समुदायमा कृतज्ञता, उपासना, र सेवाका साथ हामीप्रति परमेश्वरको प्रेम फिर्ता गर्छौं। हामीसँग उसको उपचार गर्ने र बचाउने सम्बन्धहरुमा, येशू ख्रिष्ट हामीलाई व्यक्तिगत रुपमा रूपान्तरण गर्न र हामीलाई मानव बनाउन - अर्थात् हामीलाई उहाँमा वास्तविक मानिस बनाउन को लागी सामेल छ। उहाँसँगको हाम्रा सबै सम्बन्धहरूमा, उहाँ हाम्रो विश्वासको व्यक्तिगत प्रतिक्रियामा हामीलाई वास्तविक र पूर्ण मानव बनाउनुहुन्छ। यो हामीभित्रको पवित्र आत्माको सृजनात्मक शक्ति मार्फत हुन्छ जब उहाँ हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको सिद्ध मानवतामा एकताबद्ध गर्नुहुन्छ।
सबै अनुग्रहको वास्तविक अर्थ भनेको सम्पूर्ण मानिसजाति नै हुनु हो। क्रूसमा टाँगिनुभयो र पुनरुत्थान हुनुभएको येशू ख्रीष्टको अनुग्रहले उसले बचाएको मानवतालाई तुच्छ ठान्दैन। परमेश्वरको अकल्पनीय अनुग्रहले हामी भएका छौं र के गर्छौं सबैलाई ज्योति दिन्छ। हाम्रो पश्चाताप र विश्वासमा पनि, हामी आफ्नै उत्तर [प्रतिक्रिया] मा भर पर्न सक्दैनौं, तर ख्रीष्टले हाम्रो र हाम्रोलागि पिताले प्रस्ताव गर्नुभएको उत्तरमा भरोसा राख्दछौं! उनको मानवतामा येशू विश्वास, रूपान्तरण, उपासना, संस्कारको उत्सव र ईभान्जेलिजिमलगायत सबै कुरामा परमेश्वरसामु हाम्रो प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुनुभयो।
दुर्भाग्यवस, कार्ल बर्थलाई साधारणतया बेवास्ता गरिएको छ वा अमेरिकी इभान्जेलिकल्सले गलत अर्थ लगाएको छ, र थोमा टोरेन्सलाई प्रायः बुझ्न गाह्रोको रूपमा चित्रण गरिएको छ। तर बार्थको चुनावी सिद्धान्तको पुनःनिर्माणमा देखा परेको धर्मशास्त्रको गतिशील प्रकृतिलाई बुझ्न नसक्दा धेरै ईभान्जेलिकलहरू र सुधारिएका इसाईहरू पनि व्यवहारको पासोमा पर्न बाध्य छन् र भगवानले मानव व्यवहारको बिचमा के रेखा छ भनेर बुझ्न संघर्ष गरिरहेका छन्। र मुक्ति तान्दछ।
चलिरहेको सुधारको महान सुधार सिद्धान्तले हामीलाई सबै पुरानो विश्व दृश्यहरू र ब्यवहार-आधारित थियोलॉजीजबाट स्वतन्त्र पार्नु पर्दछ जुन विकासलाई बाधा पुर्‍याउँछ, स्थिरता बढावा दिन्छ र ख्रीष्टको शरीरसँग इक्युमेनिकल सहयोग रोक्दछ। तर के चर्चले प्राय: सबै किसिमको वैधानिकताका साथ "छाया बक्सि” "आयोजना गर्दा मुक्तिको आनन्दबाट वञ्चित हुन सकेको छैन र? यस कारणले गर्दा, चर्चलाई प्रायः न्याय र ब्यबस्थाको केन्द्रको रूपमा चित्रण गरिएको छ, अनुग्रहको लागि एउटा करारको सट्टा।
हामी सबैको ईश्वरशास्त्री छ - एउटा तरिका हामी भगवानको बारेमा सोच्दछौं र उहाँलाई बुझ्छौं - चाहे हामी यो जान्दछौं वा जान्दैनौं। हाम्रो ईश्वरशास्त्रले हामी कसरी परमेश्वरको अनुग्रह र मुक्तिको बारेमा सोच्छौं र बुझ्छौं भनेर असर गर्छ।
यदि हाम्रो धर्मशास्त्र गतिशील र सम्बन्धवाचक छ भने, हामी परमेश्वरको सदासर्वदाको मुक्तिको वचनको लागि खुला हुनेछौं, जुन उहाँ हामीलाई एक्लै येशू ख्रीष्टमार्फत अनुग्रहमा प्रशस्त मात्रामा दिनुहुन्छ।
अर्कोतर्फ, यदि हाम्रो धर्मशास्त्र स्थिर छ, हामी कानुनी धर्मको, धर्म हो
न्याय र आध्यात्मिक स्थिरता मिल्छ।
कृपा, धैर्यता, दया, र शान्ति संग हाम्रो सम्बन्ध को सबै स्वाद कि एक सक्रिय र वास्तविक तरिकामा येशू चिन्नु भन्दा, हामी धार्मिकता को हाम्रो ध्यानपूर्वक परिभाषित मापदण्ड पूरा गर्न असफल गर्नेहरूको न्याय, बहिष्कार, र निन्दा अनुभव गर्नेछौं। ।
स्वतन्त्रता मा एक नयाँ सृष्टि
धर्मशास्त्रले फरक पार्छ। हामी कसरी परमेश्वर जान्दछौं त्यसले मुक्तिलाई बुझ्ने तरिकालाई असर गर्छ र हामी इसाई जीवन कसरी बिताउँछौं। उहाँ कसरी बस्नुपर्दछ वा हुनुपर्दछ भन्ने ईश्वरीय सोचविचार गरेर बनेको ईश्वर स्थिरको कैदी होइन।
मानवहरू तार्किक रूपमा भगवान को हुनुहुन्छ र उहाँ कस्तो हुनुपर्दछ भनेर सोच्न असमर्थ छन्। उहाँ हामीलाई को हुनुहुन्छ र उहाँ को जस्तै हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वर हामीलाई बताउनुहुन्छ, र उहाँ वास्तवमै जो हुन चाहानुहुन्छ भनेर स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, र हामीलाई आफुलाई प्रेम गर्ने, जो हाम्रो लागि हुनुहुन्छ, र येशू ख्रीष्टमा आफैले हामीलाई प्रकट गर्नुभयो। कसले मानवता को कारण छनौट गर्यो - तपाईको र मेरो सहित - उसको आफ्नै।
येशू ख्रीष्टमा हामी हाम्रो पापी दिमाग, घमण्ड र निराशबाट स्वतन्त्र छौं, र उहाँको प्रेमपूर्ण संगतिमा हामी परमेश्वरको शालोम शान्ति अनुभव गर्न अनुभवी भई नयाँ भएका छौं।
टेरी Akers र माइकल Feazell